५ वर्षभित्र मुलुककै नमूना शिक्षालय बनाएर छाड्छौं - प्राध्यापक पाण्डे - Onlinesamaya.com
५ वर्षभित्र मुलुककै नमूना शिक्षालय बनाएर छाड्छौं – प्राध्यापक पाण्डे
काठमाडौँको धापासीमा अवस्थित तिलिङ्गाटार माध्यमिक विद्यालय एक सामुदायिक बिद्यालय हो । वि.सं. २०१७ सालमा पञ्चकन्या विद्यालयको रुपमा अनौपचारिक रुपमा शुरुवात भएको यस विद्यालय २०१९ सालमा नेपाल सरकारबाट यसले पञ्चकन्या प्राविको स्वीकृत पाएको हो । सोहि विद्यालयका प्राध्यापक सरोजकुमार पाण्डे संगको कुराकानी :
यस बिद्यालयको बारेमा बताइदिनुस न ?
विद्यालयमा कस्ता परिवर्तन तथा सुधार ल्याउनुभएको छ ?
सुधारका लागि कस्ता–कस्ता कार्यहरु गर्नुभयो ?
अन्यभन्दा यो विद्यालयका बिशेषताहरु के–के छन् ?
स्रोत भनेको जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेको जस्तै हो । हामीले चहुरमा बच्चा पढाएर चन्दाबाट १९ कोठाको भवन बनाएका हौं । देश/विदेशमा सहयोगका लागि गुहार मागियोे । शान्ति मन्त्रालय, जर्मनी, युनेस्को अन्य सरकारी निकायहरुबाट सहयोग जुटायौं । हामीले सहयोगकै भरमा नमूना म्याथमेटिक्स ल्याव बनाएका छौं । सहयोगका लागि चन्दा, घरदैलो त गरियो नै, तीनपटक धान्यञ्चल महायज्ञ गर्यौं । महायज्ञबाटै ११ र १२ कक्षा चलाएका हौं । तत्कालीन जिविस, नगरपालिका, शान्ति मन्त्रालय, जिशिकाबाट विभिन्न मर्मत, भवनलगायतका सहयोग ल्यायौं । दुईवटा ट्रस्ट ल्याएर विज्ञानको फिजिक्स, बायोलोजी र क्यमेस्ट्रीको ल्याब बनाउन सफल भयौं । सिटिइभिटिबाट कम्प्यूटर ल्यायौं । जर्मनहरुबाट कम्प्यूटर, कोरियनहरुबाट ल्यापटप सहयोग र लाइब्रेरी ल्यायौं । युनेस्कोबाट सहयोग ल्यायौं । सहयोग माग्ने ठाउँमा कतै छाडेनौं । यदि इच्छा भए सहयोग जुटाउन समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । पैसाबिनै काम शुरु गरेका छौं र त्यही काम देखाएर हात थाप्दै सहयोग माग्दै पूरा गरेका छौं । यसै गरेर २० वर्षमा विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारमा आमूल फड्को मार्न सफल भएको छ । हामी भौतिक रुपमा कुनै निजीभन्दा कम छैनौं । निजी स्रोतका शिक्षकहरुलाई सकेसम्म सरकारीसरह सुविधा, पोशाक भत्ता दिने गरिएको छ । अहिले शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावक सबै खुशी हुनुहुन्छ । हामी नमूनाको पनि नमूना विद्यालय बनाएरै देखाउँछौं । तीन वर्षभित्र भौतिक सुविधासम्पन्न बनाएर ५ वर्षभित्र मुलुकै नमूना शिक्षालय बनाएर छाड्छौं ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर कमजोर हुनुको कारण के लाई मान्नुहुन्छ ?